Eyothusayo 6 Berth Luxury Lodge
Ipaki yeholide sinombuki zindwendwe onguDee
Swift Whistler Luxury Lodge
Iloji emangalisayo enokuchukunyiswa okuninzi okongeziweyo. Ikhaya eliphangaleleyo ukusuka ekhaya elizaliswe zizibane ezininzi zendalo ukusuka emgangathweni ukuya kwiifestile zesilingi kunye neengcango zepatio eziphindwe kabini. Ikhitshi edityanisiweyo yeglosi ephezulu ene-dishwasher kunye ne-cooler yewayini. Iisethi zokuma zasimahla kunye nefenitshala yegumbi lokutyela. Igumbi lokulala eliyinkosi linendawo yalo yokuhamba-hamba kwiwadi enendawo engamampunge kwaye inokufikelela kwindawo yokuhombisa ukusuka kwiingcango zayo zepatio. Kukho indawo yokupaka yasimahla ecaleni kwendawo yokulala. Wi-Fi kunye neTV.
Indawo yokulala inendawo yayo enkulu yabucala ehonjisiweyo enefenitshala yangaphandle yerattan kunye nezibane. Umgangatho ophakamileyo wechibi wenza umbono omangalisayo wechibi kunye namadada namarhanisi asekuhlaleni. Isithuba esimangalisayo saloo mava azolileyo eAl Fresco. Eli chibi liyalotywa ngelayisenisi.
Kukho ibha / indawo yokutyela kwisiza kunye nevenkile encinci yezinto eziyimfuneko. Indawo 'iwele' kunye ne-Seawick Holiday Camp enedama lokuqubha, ii-arcades kunye namagumbi eklabhu ngentlawulo eyahlukileyo.
Indawo ikuhambo lwemizuzu eli-15 ukuya kwilali yaseSt Osyth. Ukuya phambili nje kukho iCurve Wake Park ebonelela nge-wakeboarding, yima ngokubheqa ukukhwela & ukukhwela i-ringo kuye nabani na ongaphezulu kweminyaka eyi-8. Ukuphuma okufutshane kuyakusa eClacton kuLwandle kunye nalo lonke ulonwabo lwe-pier. Ukuba ukhetha ubomi obuzolileyo kukho iMartins Farm Country Park kolu hambo luthandekayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Saint Osyth